Faayilii - Bakka haleellaan itti dhaqqabe jedhame, buufata xiyyaaraa Irbiil, Iraaq
Haleellaan rookkeetii Iraaqa gama kaabaatti har’a geggeessame hojjetaa gamtaa wal taatota Yunaayitid Isteetis tokko ennaa galaafatu kanneen biroo sagal madeessee jira. Dubbi himaan waraanaa Yunaayitid Isteetis Coloneel Waayne Marotto akka jedhanitti kibxata har’aa ganama rookkeettiin 14 kan furguggifame yoo ta’u sadii maadhee qilleensaa loltoonni Yunaayitid Isteetis keessa jiraatan kan buufata xayyaara Irbil cina jiru haleele.
Gareen hagas hin beekamne kan Sarayaa Awiliyaa al-Dam jedhamu haleellaa sanaaf itti gaafatama fudhate. Ministiriin dhimma alaa Yunaayitid Isteetis Antonii Biliinken ibsa har’a kennaniin “ Iraaq naannoo Kurdistaanitti haleellaa rookkeetii har’a raawwatametti hedduu aarree jirra.
Hojjetaa sivilii har’a haleellaa sanaan ajjeefamee akkasumas uummata Iraaqi kanneen hookkara gocha gara jabinaan dararamaa jiranii ilaalchisuun gadda keenya ni ibsina.
Balaa dhaqqabe sana ilaalchisee mari’achuu akkasumas kanneen itti gaafatamoo ta’an akka itti gaafataman tattaaffii ta’u deggeruuf muummicha ministeeraa naannoo Kurdistan Masruur Barzaaniitti waliin mari’adheen jira” jedhan. Barzaaniin twitter irratti ergaa maxxansaniin Blinken waliin waa’ee haleellaa warren lunna ta’anii ilaalchisee mari’achuu isaanii fi gareen lamaan qorannaa sana qindoomiinaan akka hordofan beeksisan.
Ajjeechaan diinota Iraq keessaan gamtaa wal taatotaa irratti raawwatame ka biroon waggaa tokko dura haleellaa maadhee Baagdaad kaabaa miseensota waraanaa Yunaayitid Isteetis lamaa fi kan Briteen galaafatee ture.
Prezidaantiin Iraq Barhaam Saaleeh tweeter irratti barreessuu dhaan haleellaan sun gocha hammaataa dhufa kan yakkatmtoota shororkeessotaa ti jedhan. Tokkummaa mootummootaatti hoogganaan gurmuu gargaarsaa Iraaq Jeanine Hennis-Plasschaert gama isaaniin gochaawwan qaanessaa fi maal na dhibdee akkasii sabatiinsi akka hin jiraanne yaaddoo guddaa uumu jedhan.
Hiriirri Deeggarsa Mootummaa Walloo Keessatti Geggeeffame
Hospitaalli Ammayyaa Haadholii fi Daa'imman Wal'aanu Finfinneetti Baname
Haalli Fayyaa Hoogganoota Siyaasaa Mana Hidhaatti Lagannaa Guyyaa 16ffaa Irra Jiranii Yaaddessaa Tahuu Dubbata, Gareen Ogeessota Fayyaa